Zimbabwe: Supporters fume after protest pastor leaves for US | Fox News
FILE -- In this July 28, 2016 file photo Zimbabwean pastor Evan Mawarire, holds his country's flag whilst singing the national anthem before addressing his supporters at the University of the Witwatersrand in Johannesburg, South Africa. Mawarire, a popular pastor who galvanized thousands of Zimbabweans into anti-government protests has become a subject of derision, fighting accusations of being a coward after he left neighboring South Africa citing safety concerns before going to the United States. (AP Photo/Themba Hadebe, File) (The Associated Press)
FILE -- In this July 13, 2016 file photo Pastor Evan Mawarire leaves the Harare Magistrates Court after the court freed him ruling that police violated his rights. Mawarire, a popular pastor who galvanized thousands of Zimbabweans into anti-government protests has become a subject of derision, fighting accusations of being a coward after he left neighboring South Africa citing safety concerns before going to the United States. (AP Photo/File) (The Associated Press)
HARARE, Zimbabwe – From a symbol of resistance and hope, a pastor who galvanized thousands of Zimbabweans into anti-government action has become a subject of derision, fighting accusations of being a coward.